မဘသ.ဟာ ဦး သိန်း စိန်​ လက် ထက်​ မှာ.ပေါ် လာ.တာ ဖြစ် တယ်။ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက် မှု.တေက လည်းဦး သိန်း စိန်​ လက် ထက်​ မှာ ပို ပြင်း ထန် လာ တယ် | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeမဘသ.ဟာ ဦး သိန်း စိန်​ လက် ထက်​ မှာ.ပေါ် လာ.တာ ဖြစ် တယ်။ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက် မှု.တေက လည်းဦး သိန်း စိန်​ လက် ထက်​ မှာ ပို ပြင်း ထန် လာ တယ်
မဘသ.ဟာ ဦး သိန်း စိန်​ လက် ထက်​ မှာ.ပေါ် လာ.တာ ဖြစ် တယ်။ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက် မှု.တေက လည်းဦး သိန်း စိန်​ လက် ထက်​ မှာ ပို ပြင်း ထန် လာ တယ်
March 5, 2017 drkokogyi
မဘသ.ဟာ ဦး သိန်း စိန် လက် ထက် မှာ.ပေါ် လာ.တာ
ဖြစ် တယ်။ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက် မှု.တေက လည်း
ဦး သိန်း စိန် လက် ထက် မှာ ပို ပြင်း ထန် လာ.တယ်။
အောင်သောင်းနဲ့ ရွှေ မန်း.ဆရာ တပည့် နှစ် ယောက်
ရဲ့. မဘသ ကို.ထောက် ပံ့ မှု.တေက ကပို များ လာ ခဲ့ တယ်။
စစ် ထောက် ပြုတ် ကလပ် စည်း တ ခု ကို
အောင်သောင်း နဲ့ သိန်း စိန် တို့ က ကျော.ထောက် နောက် ခံ လုပ် ပေးပြီး.မဘသ ကို ကျား.ကန် ပေး.ထား
တယ်။.ဝီရသူ ရဲ့ အုပ်စု မှာ လဲ ခင် ညွှန့်. လူ တ ချို့ ပါ
ခဲ့ တယ်။ မဘသ ထဲ မှာ ကို က ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ အဘ.
ကိုယ် စီ တေ နဲ့. ဖြစ် တယ်။.
ဦး.တည် ချက် ကတော့ တူ
ပါ တယ် ။.ဘာသာရေး ၊ လူ မျိုး ရေး.ကို ခေါင်း.စဉ်
တပ် ပြီး NLD အစိုးရ ကို.တိုက်. ခိုက်.ဖို့ပါ ဘဲ။ မဟန
ကလဲ အဘ တေနဲ့ အယင် က အကြီးအကျယ် ဆရာ ဒကာ တော် ဖူး.နေတော့ ဝင် မ.ပြော ရဲ တော့ဘူး။.
အဲ ဒီ မှာ ဝီဝီ တို့. စိတ် ကြိုက် ၊ ခြယ်လှယ် တော့တာ
ဒါကြောင့် မဘသ ပါ ဝင်.တဲ့ ဘာသာရေး ပြသနာ တေရဲ့ မူ လ.ဇာစ်မြစ် က ဦး သိန်း စိန် အစိုးရ
ဖြစ် ပါ တယ်။ အစက သူရ ရွှေ့ မန်း လဲ ပါ ပါ တယ်။ နေရာ မ ရတော့ မှ တော ပြော တောင်.ပြော ပြော.နေ
← ” စစ်ပွဲတွေနဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲစေချင်ပါတယ် “
Old but notaobsolete doctor and young freshly minted doctor’s discussion →